ထုတ်ကုန်များ > 2-Chloro-4-Amino-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4)
ကျနော်တို့ CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
Anti-ကင်ဆာ properties.Cytotoxicity assay ထိုကဲ့သို့သောလူ့အူမကြီးကင်ဆာ (HCT116), လူ့နာတာရှည် myeloid သွေးကင်ဆာ (K562) နှင့်လူ့ရင်သားကင်ဆာ (SKBR3) ဆဲလ်လိုင်းများအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်လိုင်းများဆန့်ကျင်သမျှသောဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့အဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်အတူ Quinazolines heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းများဟာကြီးမားတဲ့မိသားစုများမှာ 3- (4,5-Dimethylthiazol-2-yl) ကို အသုံးပြု. -2,5-Diphenyl tetrazolium ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine (MTT), Trypan အပြာနှင့်အ Lactose ကို dehydrogenase လွှတ်ပေးရန် assay ။ ရွေးချယ်ထားသောဒြပ်ပေါင်းများ EAC အကျိတ်မော်ဒယ်မှာမိမိတို့ Anti-အကျိတ်နဲ့ anti-angiogenic အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမော်လီကျူး docking လေ့လာမှုများပညာရှင် 2D sketcher နှင့်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု. ရေးဆွဲခဲ့ကြသည် minimize OPLS 2005 အားဖြင့်ပိုဆိုးခဲ့သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှု quinazoline core ကိုအပေါ် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက် site ကိုမှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံမှတဆင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်အတူအာနိသင်နှင့် selection ဟန်ချက်ညီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ တိုးမြှင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမျိုးကွဲခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်ဒီ quinazoline ATM စက်များ kinase inhibitor ပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေကျယ်ပြန့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-ပိုင်ဆိုင်မှုဆက်ဆံရေးဟာလေ့လာမှုများ။ ဒါဟာ C-7-methoxy အုပ်စုတစ်စုအာနိသင်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေချိန်မှာ, သိသိသာသာ C-6-methoxy အုပ်စုတစ်စုအစားထိုးအာနိသင်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲဇီဝဖြစ်စဉ်တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ကတိပေး Analogues 20, 27g နှင့် 27n အတွက်စသည်တို့ဆေးဝါးဗေဒအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ် murine pharmacokinetic နှင့်သည်းခံစိတ်လေ့လာမှုများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ compound 27g သိသိသာသာ4၏ရန်ဆွေမျိုး pharmacokinetics တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပိုင်တော်မူ၏။ compound 27g လည်း4ထက်အခြား kinases ဆန့်ကျင်သိသိသာသာပိုပြီးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, 27g အလားအလာ radiosensitizer အဖြစ်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ကောင်းသောသမ္မတလောင်းဖြစ်ပါတယ်။
MDL အရေအတွက် MFCD00051734
InChI Key ကို HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 239.66
အပြုံး Clc2nc1c (cc (OC) က c (OC) c1) က c (n2) N ကို
အရည်ပျော်မှတ် 262-268 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
ကိုင်တွယ်ပြီးနောက် thouroughly ရေချိုးအသားအရေ♦။
ရေတွင်းတစ်တွင်း-လေဝင်လေထွက်အရပ်ဌာန၌♦ Store မှာ။ တင်းကျပ်စွာတံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာထားပါ။
♦အနေနဲ့အတည်ပြုစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစက်ရုံမှအကြောင်းအရာများကို / ကွန်တိန်နာများစွန့်ပစ်ခြင်း။
Anti-ကင်ဆာအေးဂျင့်အဖြစ်ပေါင်းစပ်နှင့်ဝတ္ထု quinazoline-sulfonamides ၏ဇီဝအကဲဖြတ်
n- (quinazoline-4-yl) sulfonamides မှတစ်ဦးကအားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးချဉ်းကပ်နည်းကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အထွက်နှုန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော aryl, hetero aryl, alkyl နှင့် cyclopropyl sulfonamides ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
Bioorganic နှင့်ဆေးဝါးဓာတုဗေဒပေးစာ 2017 vol ။ 27 #9စ။ 1923 - 1928
မော်လီကျူး-ပစ်မှတ်ထားကုထုံးများအတွက် ROS1 kinase inhibitors
ROS1 apoptosis, ရှင်သန်မှု, ကွဲပြားခြားနားမှု, ပြန့်ပွား, ဆဲလ်ရွှေ့ပြောင်းနှင့်အသွင်ပြောင်းတူသောတော်တော်များများဆယ်လူလာဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းညှိသောအဓိက transmembrane Receptor protein အား tyrosine kinase ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ 2016 vol ။ 23 #2စ။ 142 - 160
2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
APICMO ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဒဏ်ငွေဓာတုပစ္စည်းသင် CAS number ကို 27631-29-4 ရှိသူများအပါအဝင်အပေါ်ရေတွက်လို့ရပါတယ်အရည်အသွေးနှင့်အတူ, သင် Spectrum ကကမ်းလှမ်းအားလုံး 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline ထုတ်ကုန်စိတ်ချပါနိုင်ပြီးများအတွက်တန်းလိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်ကျော်လွန် တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းထုတ်ကုန်။
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 2-Chloro-4-Amino-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4)
သင်က high-quality 2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်နေရာရှာနေပါသလား? Apicmo.com သငျသညျမိုးလေကြကတည်းကမပိုကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ 2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-dimethoxyquinazoline ထုတ်ကုန်များ၏အမြင့်ဆုံးတန်း၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်သောအခြားစည်းမျဉ်းများအကြားလက်ရှိကောင်းသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့် (cGMP) မှတင်းကျပ်သောလိုက်နာမှု၌အကြှနျုပျတို့၏ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ သငျသညျအသေးသို့မဟုတ်ကြီးမားသောပမာဏအတွက်ထုတ်ကုန်လိုအပ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့ဆက်ဆက်သင့်ကျောတယ်ပါပြီ။
2-Chloro-4-Amino-6,7-Dimethoxyquinazoline 23680-84-4 ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
[စာတန်းထိုး id = "attachment_696" align = "alignnone" width ကို = "500"] Quinazolines အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ[/ စာတန်းထိုး]
Quinazolines Anti-ကင်ဆာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ heterocyclic ဒြပ်ပေါင်းများ၏ကြီးမားသောမိသားစုဖြစ်ကြသည်။ Cytotoxicity assay 3- (116-Dimethylthiazol-562, Lactose ကို dehydrogenase လွှတ်ပေးရန် assay သုံးပြီးလူ့ရင်သားကင်ဆာ (SKBR3), လူ့အူမကြီးကင်ဆာ (HCT4,5), နှင့်လူ့နာတာရှည် myeloid သွေးကင်ဆာ (K2) ဆဲလ်လိုင်းများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဆဲလ်လိုင်းများဆန့်ကျင်သမျှသောဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့ပြုခဲ့ကြ -yl) -2,5-Diphenyl tetrazolium ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ bromine (MTT), နှင့် Trypan အပြာ။ ရွေးချယ်ထားသောဒြပ်ပေါင်းများ EAC အကျိတ်မော်ဒယ်မှာမိမိတို့ Anti-angiogenic နဲ့ anti-အကျိတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမော်လီကျူး docking လေ့လာမှုများပညာရှင် 2D sketcher နှင့်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု. ရေးဆွဲခဲ့ကြသည် minimize OPLS 2005 အားဖြင့်ပိုဆိုးခဲ့သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှု quinazoline core ကိုအပေါ် metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက် site ကိုမှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံမှတဆင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်အတူရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အာနိသင်ဟန်ချက်ညီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဇီဝဖြစ်စဉ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်တိုးမြှင် selection နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမျိုးကွဲခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်ဒီ quinazoline ATM စက်များ kinase inhibitor ပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေကျယ်ပြန့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-ပိုင်ဆိုင်မှုဆက်ဆံရေးဟာလေ့လာမှုများ။ ဒါဟာ C-7-methoxy အုပ်စုတစ်စုအာနိသင်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေချိန်မှာ, သိသိသာသာ C-6-methoxy အုပ်စုတစ်စုအစားထိုးအာနိသင်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲဇီဝဖြစ်စဉ်တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ကတိပေး Analogues 20, 27g နှင့် 27n အတွက်စသည်တို့ဆေးဝါးဗေဒအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ် murine pharmacokinetic နှင့်သည်းခံစိတ်လေ့လာမှုများအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ compound 27g သိသိသာသာ4၏ရန်ဆွေမျိုး pharmacokinetics တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပိုင်တော်မူ၏။ compound 27g လည်း4ထက်အခြား kinases ဆန့်ကျင်သိသိသာသာပိုပြီးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, 27g အလားအလာ radiosensitizer အဖြစ်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်ကောင်းသောသမ္မတလောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း၏မော်လီကျူးပုံသေနည်း C2H4ClN6,7O23680 နေစဉ် 84-Chloro-4-အမိုင်နို-10-Dimethoxyquinazoline CAS အမှတ် 10-3-2 ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်နေသည်။ ဒါ့အပြင်မျိုလျှင် 4-အမိုင်နို-2-Chloro-6,7-Dimethoxyquinoline, ဝင်းအဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်သောရှိုက်သို့မဟုတ်ထိမိခြင်းနှင့်ဒါသည်၎င်း၏လျှောက်လွှာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှသီးသန့်ကန့်သတ်ထားသည်။ အပြင်ကသာနည်းပညာပိုင်းအရည်အချင်းပြည့်မီသူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့်သို့မဟုတ်အောက်တွင်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
2-Chloro-4-Amino-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) synonym တွေဟာ
တစ်စုံတစ်ဦးက 4-အမိုင်နို-2-Chloro-6,7-Dimethoxyquinoline သို့မဟုတ် 4-Chloro-, 2-အမိုင်နို-6,7-chloro-7-dimethoxyquinazoline, 4-DiMethoxy-Quinazoline, 2-အမိုင်နို-6,7-Chloro-2-Dimethoxyquinoline ကြောင့်ခေါ်ဆိုခြင်းရှိမရှိ 6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, ဤအရာအလုံးစုံအမည်များကိုအတူတူ product- 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine ကိုရည်ညွှန်းသည်။
2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ
ဓာတုပုံသေနည်း C10H10ClN3O2 နှင့်အတူ, 2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline 239.04600, 239.65800 ၏မော်လီကျူးအလေးချိန်တစ်ခုအတိအကျကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ PSA နှင့် LogP အသီးသီး 70.26000 နှင့် 2.46380 ဖြစ်ကြသည်။
7-DiMethoxy-Quinazoline Off-အဖြူအစိုင်အခဲပုံစံနှင့်၎င်း၏အရည်ပျော်မှတ်အတွက်သာမန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် 262-278ºCကနေလာနေကြပါတယ် (Dec ။ ) က၎င်း၏ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် 374 mmHg မှာ760ºCဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ရဲ့ပေါက်ကွဲလုနီးပါး 127 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (lit ။ ) ဖြစ်ပါသည်, အခိုးအငွေ့ဖိအား 8.63 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 06E-25mmHg ဖြစ်ပါသည်, ထိုယိုင်ညွှန်းကိန်း 1.649 နှင့်ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆ 1.391 g / cm3 ဖြစ်ပါတယ်။ အကြံပြုထားတဲ့အခြေအနေများအောက်တွင်သိမ်းဆည်းထားလျှင်ထုတ်ကုန်ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
အောက်ပါ 2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline များအတွက်အကြံပြုပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်
2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) computing Properties ကို
Monoisotopic Mass 239.046 g / mol
အတိအကျ Mass 239.046 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 70.3 တစ် ^ 2
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADccBzMAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAA
JiNLqLE + NuENCpuwBtK6Cew0BMOIEABAg
Rotate ဘွန်းအရေအတွက် 2
မော်လီကျူးအလေးချိန် 239.659 g / mol
ထူးခြားသောအဆိပ်အတောက်နှင့်အတူ - ခံတွင်း, အမျိုးအစား 4, ဝင်းမျိုလျှင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကြောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအစာစား, အရက်သောက်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ဆန့်ကျင်သတိပေးခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ကံအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးဝင်းအတွင်းတွင်ရှူရှိုက်ပါကသူသို့မဟုတ်သူမ၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်လေးနက်ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တစ်ဦးက၎င်း၏ဆိုးကျိုးများလျှော့ချဖို့ကြိုးစားကြသည်အတွက်သားကောင်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့သင့်၏။ လူတစ်ဦးအသက်ရှူခြင်းမဟုတ်သည်ဆိုပါကသူသို့မဟုတ်သူမပထမဦးဆုံးအကူအညီတစ်ခုပုံစံအဖြစ်အတုအသက်ရှူပေးအပ်ခြင်းခံရကြောင်းအကြံပြုလိုတယ်။ သားကောင်ပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှ soonest တစ်ဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစက်ရုံမှတဟုန်တည်းပြေးရပါမည်။
မျိုလျှင် 7-DiMethoxy-Quinazoline ကိုလည်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းဖြတ်သန်းအဖြစ်ဒြပ်ပေါင်းများအစာခြေစနစ်ယားယံစေပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျမတော်တဆထုတ်ကုန်သုံးစွဲလျှင်, သင်မိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်သန့်ရှင်းသောရေနှင့်အတူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သင်၏နှုတ်ကိုလျှော်ရန်အကြံပြုပါသည်။ သို့သော်ဤမယ့်ပထမဦးဆုံးအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆေးကုသရှာအံ့သောငှါသင့်ပါသည်။ ဓာတုကြေညက်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ဖို့လည်းအားနည်းခဲ့သူက၎င်း၏အခြားလူတစ်ဦးလျှင်, ပထမဦးဆုံးအကူအညီနှင့်အတူသူတို့ကိုကူညီနှင့်ဆေးဝါးအကူအညီများကိုရရှိရန်။
သင့်ရဲ့အသားအရေသို့မဟုတ်မျက်စိက 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine နှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာလျှင်, ဝင်းအဖြစ် 4-အမိုင်နို-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ပြင်းထန်ယားယံစေနိုင်ပါတယ်ကိုလည်းခံရဖွယ်ရှိသည်။
မတော်တဆဝင်းနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ရရှိသွားတဲ့သူတစ်ဦးဟာပိုးအဝတ်များနှင့်ဖိနပ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ 15 မိနစ်ထက်မနည်းအဘို့ရေနှင့်ဆပ်ပြာစာရေးနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်အသားအရေဧရိယာရှင်းလင်းရန်သင့်ပါတယ်။
မျက်စိညစ်ညမ်းမှု၏အမှု၌, 15 မိနစ်ထက်မနည်းဘို့ရေကိုအများကြီးနှင့်အတူဘေးဒဏ်သင့်မျက်စိ (s) ကိုရှင်းလင်းရန်။ သငျသညျဤသို့ပြုသကဲ့သို့, ရေတတ်နိုင်သမျှဓာတု၏သလောက်ဖယ်ရှားကြောင်းသေချာစေရန်ရံဖန်ရံခါသင့်ရဲ့အထက်အဖြစ်နိမ့်မျက်တောင်ရုတ်သိမ်းပေးရန်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဆရာဝန်၏အာရုံကိုရှာခြင်းငှါသင့်ပါတယ်။
2-Chloro-4-Amino-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) Handling
ဒီထုတ်ကုန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရပါမည်။ အထူးသဖြင့်, သင်၏မျက်စိသို့မဟုတ်အသားအရေနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာလျက်ကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့သလောက်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်စမ်းပါ။ သင်ကစတင်သုံးစွဲမတိုင်မီလုပ်ဖို့်၏ပထမဦးဆုံးအရာမှဖြစ်ပါသည်:
အကာအကွယ်မျက်မှန်ဝတ်ဆင်: ငါတို့သည်အစောပိုင်းကပေါ်ကဒီမှာမြင်ကြပြီအမျှကြောင့်ကိုယ်မျက်စိနှင့်ဆက်သွယ်လာလျှင်, ထုတ်ကုန်မျက်စိယားယံမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရှောင်ရှားရန်, ကသငျသညျ EN166 ညီကြောင်းခြမ်းဒိုင်းနှင့်အတူဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျက်မှန်ပေါ်တွင်တင်အရေးကြီးပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ရင်, အမျက်မှန် NIOSH (အမေရိကန်) နှင့်မာခ် 166 (အီးယူ) နဲ့တူထင်ရှားတဲ့ဥပဒေရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများအောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီးအတည်ပြုရပါမည်။
တစ်ဦးဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးပေါ်တွင်တင်: ဤထုတ်ကုန်ဓာတ်များကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ဦးဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ထားခွငျးဖွစျသညျ။ သင်တို့သည်လည်းရှူရှိုက်မိပါအန္တရာယ်များကိုရှောင်လွှဲနိုင်ရန်မြေမှုန့်သို့မဟုတ် Aerosol ဖွဲ့စည်းကနေတားဆီးရန်အကြံပြုပါသည်။ သငျသညျမွမှေုနျ့ကိုဖွဲ့စည်းသည်နေရာ၌ရှိကြ၏လျှင်, သင်လျော်သောလေဝင်လေထွက်အိပ်ဇောပေးသင့်ပါတယ်။
လက်အိတ်ပေါ်တွင်တင်: သင်ကိုလည်းအီးယူညွှန်ကြားချက် 89 / 686 / EEC သတ်မှတ်ချက်များအဖြစ်မာခ် 374 စံနှင့်ကိုက်ညီသောအထူးသဖြင့်လက်အိတ် impervious အဝတ်အစားဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်အိတ်တစ်စုံတစ်ဦးက 7-DiMethoxy-Quinazoline ကိုင်တွယ်ရန်သူတို့ကိုကျီမတိုင်မီကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ခံရဖို့သင့်၏။ သင်ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူပြုပြီးတာနဲ့ကအသားအရေအဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားရန်၎င်းတို့၏အပြင်ထိမပါဘဲလက်အိတ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထို့နောက်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအဖြစ်ကောင်းသောဓာတ်ခွဲခန်းအလေ့အကျင့်အညီအသုံးပြုသောလက်အိတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းစွာသင်၏လက်ကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်သင်၏နောက်လှုပ်ရှားမှုမှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်သူတို့ကိုအခြောက်။
ကကိုင်တွယ်နေစဉ်အပြင်, သင်ကအခြေခံအားဖြင့်, သင်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းဓာတုရန်သင့်ထိတွေ့ minimize သငျ့သညျမွမှေုနျ့, အခိုးအငွေ့, အခိုးအငွေ့သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ပုံစံရှိမရှိ, သောက်စရာသို့မဟုတ်မီးခိုးမစားသင့်တယ်။
သင်ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ်ကဖျောပွဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကာကွယ်တားဆီးဖို့ပေါက်ကြားသို့မဟုတ်ဖိတ်မထားဘူးဆိုတာသေချာ။ spillage ၏အမှု၌, ထိုကဲ့သို့သောခြောက်သွေ့သောသဲလုံးနှင့်အမျှအာဂွန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြု. ၎င်း၏ယိုဖိတ်မှုကိုစုပ်ယူ, ပြီးတော့ဓာတုစွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာထဲသို့များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ ဒါကြောင့်ရေနုတ်မြောင်းသို့မဟုတ်ပါကပတ်ဝန်းကျင်ကိုရန်၎င်း၏ရိနာစွဲစေနိုင်သောမည်သည့်လမ်းဝင်ခွင့်ပြုမထားပါနဲ့။
ဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြုမှုအတွက်ထုတ်ကုန်တင်းကျပ်စွာပိတ်ထားမယ့်တစ်ဦးကွန်တိန်နာထဲမှာထည့်သွင်းထားရမည်, ပြီးတော့တစ်ဦး, အေးမြခြောက်သွေ့သောနှင့်လေဝင်လေထွက်ရာအရပျထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဘူး။
2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) စွန့်ပစ်ခြင်း၏နည်းလမ်းများ
ထုတ်ကုန်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်သဘောသဘာဝစဉ်းစား၎င်း၏စွန့်ပစ်ခြင်းဂရုတစိုက်နှင့်သင့်လျော်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာလုံခြုံစိတ်ချစွာအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဓာတုပကျြစီးခွငျးစက်ရုံအားဖြင့်သို့မဟုတ် flue ဓာတ်ငွေ့ပွတ်တိုက်ပါဝင်သောထိန်းချုပ်ထားမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှတဆင့်၏စွန့်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ရဆေိုးစနစ်များကိုမှဆေးရုံကဆင်းခြင်းကိုဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
ထုတ်ကုန်နှင့်အတူညစ်ညမ်းခဲ့ကြသောကွန်တိန်နာ, သူတို့ triply နှင့်ဆေးပြီးတော့ပြန်လည်အသုံးပြုသို့မဟုတ် reconditioned နိုင်ပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်သည်အခြား application များအဘို့ထိုသူတို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖို့ကွန်တိန်နာဖောပြီးနောက်သန့်ရှင်းဖို့မြေသို့သူတို့ကိုငါများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးနိုင်ပါတယ်။
2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline မီးသတ်ဆောင်ရွက်ချက်များ Fighting
သငျသညျမီးကိုချွတ်ပယ်ရန်စတင်ရှေ့တော်၌ထိုထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီးဖြစ်ပွား၏အမှု၌, Self-ပါရှိသောအသက်ရှူယန္တရားအဖြစ်အကာအကွယ်ဂီယာနှင့်အတူစနစ်တကျကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုဖုံးလွှမ်း။ မီးကို turn off မှရေမှုန်ရေမွှား, ဓာတုရေမြှုပ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သို့မဟုတ်ပင်ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအသုံးပြုပါ။
2-Chloro-4-Amino-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) Incompatibilities
အဆိုပါထုတ်ကုန်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, အက်ဆစ် anhydride, အားကြီးသောဓာတ်အေးဂျင့်အဖြစ်အက်ဆစ်နှင့်၎င်းတို့၏ chloride နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
Apicmo ထိုကဲ့သို့သောဓာတုပေါင်းစပ်, Chromatography အဖြစ် Chromatography အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောသုတေသနပြုဒေသများရှိ In-depth ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူထိပ်တန်းထစ်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံအဖွဲ့ prides ။
2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline (23680-84-4) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
သင့်ရဲ့သုတေသနဒါမှမဟုတ်စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက် 2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline ပမာဏအဘို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမိန့်ချထားပါ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဖော်ရွေဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကသင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်သင်လိုအပ်တိကျစွာအဘယျသို့အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem, အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်2-Chloro-4-အမိုင်နို-6,7-Dimethoxyquinazoline, ကဏ္ဍများ 1-9 ။
ဝီလျံအင်ဒရူးထုတ်ဝေရေး, Elsevier, 22 အောက်တိုဘာ 2013 - ဆေးပညာ, ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစွယ်စုံကျမ်း, စာမျက်နှာ 12-15 ။
ရုဗင် Vardanyan, ဗစ်တာ Hruby, Elsevier, 10 မတ်လ 2006 - ဆေးပညာ, မရှိမဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ Synthesis, စာမျက်နှာ 12-18 ။